कथा के हो अनमोलको ? – Mero Film
कथा के हो अनमोलको ?
अभिनेता अनमोल केसीलाई फिल्मको सुटिङ नभएर पनि फरक परेको देखिन्न । अनमोल केसीले लकडाउन खुलेपछि ५ वटा ठूला कम्पनीका विज्ञापनमा काम गरिसकेका छन् । यसले, फिल्म खेल्ने निर्णय गर्न नपाएपनि अनमोल केसीलाई आर्थिक अभाव भएको छैन ।
अनमोल केसीका पिता भूवन केसी र अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको वादविवाद अदालतमा पुगेको छ । अदालतमा पुगेको यो मुद्दाले कस्तो बाटो लिन्छ भनेर पनि भन्न कसले सक्छ र ? अनमोललाई यो कुराले छटपटी भएको पनि होला । तर, अनमोल यो विवादमा बोल्न चाहदैनन् ।
अनमोलले फेसबुकमा लेखेका छन् कि, तपाइलाई मेरो नाम थाहा छ तर कथा थाहा छैन । अनमोलले यो किन भनेका होलान् ? किनभने, अनमोल केसीले कथा थाहा छैन भनेर उनलाई नामले त मानिसले चिनेका छन् तर उनको कथा वुझेका छैनन् भन्न खोजेका होलान् ।
२०७७ साउन १६ गते १८:२१ मा प्रकाशित
पूजालाई भिडियोको लोभ
फिल्म पाउन चाँकडी हैन, चल्नपनि पर्छ
पललाई एलिजासँग फिल्ममा जोखिम,भिडियोमा मतलब छैन
नाजिरको नजरमा विश्वकै सुन्दर महिला को ?
श्रीदेवीले चन्द्रमा हेर्नकै लागि पाइलटलाई प्लेन घुमाउन लगाइन्
अव भिडियो नखेल्ने पलको घोषणा
दर्शकले आफ्नो भन्न नसकेको फिल्म क्षेत्र
घरमा नआउन माग्ने बुढाको अपिल